17-Hydroxyprogesterone ntụ ntụ (630-56-8) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / 17-Hydroxyprogesterone ntụ ntụ
Rating: Category: Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke 17-Hydroxyprogesterone na-acha uhie uhie (630-56-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ, Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụaka 500,000 na-amụ nwa tupu United States kwa afọ. Oge ịmụ nwa (PTB), ma ọ bụ ịmụ nwa na-erughị izu 37, na-etinye ụmụ ọhụrụ n'ihe ize ndụ nke ọnwụ ma bụrụ isi ihe kpatara nkwarụ na-adịghị ala ala nke ụmụaka. Na mgbakwunye, mmefu ahụike metụtara PTB na-efu usoro nlekọta ahụike US ihe karịrị ijeri $ 26 kwa afọ. Na-egbochi PTB dị oké mkpa iji zụlite ahụike na mmepe ogologo oge nke ụmụ ọhụrụ gafee mba ahụ.
17-Hydroxyprogesterone na-ekpo ọkụ ntụ ntụ
I.17-Hydroxyprogesterone caproate ntụ ntụ isi agwa:
aha: 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Usoro Molecular: C27H40O4
Molekụla arọ: 428.6
II. 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Aha Mmiri: 17-Hydroxyprogesterone uzuzu ahihia
Aha ndị ọzọ: 17-OHPC, 17P, hexanoate
2. 17-Hydroxyprogesterone okpuru uzuzu Uzo:
Ngwá ọgwụ 17-alpha hydroxyprogesterone ọgwụ bụ progestin injectable prophyin. E gosipụtara na ọ dị irè iji gbochie ma ọ bụ na-egbu oge ịmalite ịmụ nwa n'ime ime ụmụ nwanyị nwere akụkọ banyere ịmalite ịmụ nwa .1 Ozugbo a na - enweta ya dị ka ọgwụ dị oke ọnụ, ọ nwere ugbu a ụdị (Makena; AMAG Pharmaceuticals) nke na - efu 100 ugboro karịa ihe mbụ. Na February 4, 2011, KV Pharmaceutical Company (nke e mesịrị renamed Lumara) natara nkwado site na US Food and Drug Administration iji rụpụta ma na-ere ahịa Makena, nke a na-agụnye otu ihe ahụ na-arụsi ọrụ ike dị ka ọ dị na mbụ. Nkwekorita a gụnyere inye ụmụ nwanyị ọgwụ ọjọọ ma nye KV Pharmaceutical Company ikike naanị maka imepụta Makena, nke nwere ike inye aka na ọnụahịa elu ya. Maka ọmụmụ ihe a, anyị ji nchekwa data ịchọrọ ịchọta ihe ndenye ọgwụ maka 17-alpha hydroxyprogesterone nke dị n'etiti ndị na-azụ ahịa 4000 (ọ bụghị Medicaid) ụmụ nwanyị dị ime. Ebumnuche anyị bụ ịghọta ihe eji, ụgwọ, na ihe ndị sitere na nsụgharị ọgwụ ndị a na-emepụta na nke a na-agbakwụnye.
3.What bụ usoro onu ogwu nke 17-Hydroxyprogesterone?
250 mg otu ugboro kwa izu (ụbọchị 7 niile); malite usoro ọgwụ n'etiti izu 16, ụbọchị 0 na izu 20, 6 ụbọchị gestation; gaa n'ihu ruo izu 37 (site na izu 36, 6 ụbọchị) nke ịmegharị ma ọ bụ nnyefe, ebe ọ bụla na-ebu ụzọ.
Anyị na-eduzi nnwale abụọ gbara anya, nke a na-ahụ maka ebe a na - achịkwa ụmụ nwanyị dị ime na - edekọ akụkọ ihe mere eme nke nnyefe a na - ebuteghị. A debanyere ụmụ nwanyị na 19 ụlọ ọgwụ na 16 ruo 20 izu nke gestation na enweghị mgbakọ site na central data center, na 2: 1 ruru, iji nweta ma ọ bụ izu injections nke 250 mg nke 17P ma ọ bụ izu injections nke inert oil placebo; a nọgidere na-aga n'ihu ruo mgbe a ga-enyefe ma ọ bụ na 36 izu nke gestation. Ihe kachasị pụta bụ ịnyefe tupu oge 37 nke gestation. A na-eme nchọpụta dịka ụkpụrụ nke ebumnuche.
Ebumnuche akara ala nke ụmụ nwanyị 310 nọ na progesterone na ụmụ nwanyị 153 nọ na placebo bụ otu. Ọgwụgwọ na 17P budata belata ohere nke nnyefe na ihe na-erughị ụbọchị 37 nke nkedo (ọnọdụ, 36.3 pasent dị na otu onye na-ahụ maka mgbatị na vs. 54.9 pasent na mpaghara placebo, nsogbu dị ize ndụ, 0.66 [95 percent interval, 0.54 to 0.81]), ezigara na ntinye oge 35 na njigide (ihe kpatara, 20.6 percent vs. 30.7 percent, ihe ize ndụ metụtara, 0.67 [95 percent oge obi ike, 0.48 ka 0.93]), na nnyefe na obere oge 32 gestation (11.4 percent vs. 19.6 percent ; ihe ize ndụ, 0.58 [95 percent oge obi ike, 0.37 ka 0.91]). Ụmụaka nke ụmụ nwanyị na-emeso 17P nwere ọtụtụ ọnụọgụ nke necrotizing enterocolitis, hemorrhage intraventricular, na mkpa maka oxygen ọzọ.
Njere nke 17P kwa izu mere ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nnyefe na-ebute oge na-aga n'ihu n'etiti ndị inyom bụ ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ maka ịbịanye aka na mbu ma belata ọtụtụ nsogbu na ụmụ ha.
4.How Cortexolone 17-Hydroxyprogesterone na-arụ ọrụ ntụpọ?
17a-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) bụ progestogen synthetic. Ahụ mmadụ anaghị eme ka ihe ahụ dị na ya. Aha ọzọ a na-akpọ "hexanoate," bụ onye ester sitere na hexanoic (ma ọ bụ caproic) acid. Usoro nke 17-OHPC gosipụtara na Ọgụgụ. Ụfọdụ ndị dọkịta kwuru na 17-OHPC dị na ewu. Nke a yiri ka ọ bụ omenala, n'ihi na njirimara nke mole mole a sitere n'anụ ahụ, anụ ahụ si ewu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị ndụ nwere ike ghara ikwenye na nyocha akwụkwọ.
Mmetụta nke 17-OHPC na ogologo oge nke ndị ọrịa nwere akụkọ ihe mere eme nke ≥ 1 ọmụmụ ọmụmụ mbụ ndị e kenyere iji nweta 17-OHPC na otu ngalaba na-adịghị edozi. Enweghị ihe dị iche na ogologo oge na-emekarị ka ọ dịkwuo oge n'oge ndị inyom natara 17-OHPC. N'ụzọ dị iche, progesterone na-eme ka mmiri ghara ịdị na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-arịa ọrịa na-eme ka mkpịsị ụkwụ na-adị mkpụmkpụ na ndị ọrịa nwere akụkọ ihe mere eme nke ọmụmụ tupu oge ebido ma ọ bụ na-eme mkpụmkpụ.
17 alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) bụ ụdị mmepụta nke progesterone nke egosipụtara iji belata nlọghachi nke PTB maka ndị inyom na-enwe abụ ọchị nke nwere akụkọ ihe mere eme nke gara aga. Ụmụ nwanyị nwere akụkọ ihe mere eme nke PTB ga-enwe ike ịmalite nwa ọhụrụ tupu e jiri ya tụnyere ndị inyom. Ndị dọkịta na-edekarị, 17P na-eduzi site na injections kwa izu na-amalite na 16-24 izu ruo mgbe ị ga-ebute. Nnyocha na-egosi na inye 17P otu nwanyị ruru eru na-ebelata ohere nke inwe PTB ọzọ site na 33 pasent. Kwa afọ, ihe dịkarịrị, ụmụ nwanyị dị ime 30,000 ruru eru ma bụrụ ndị a na-ewere dị ka ndị ruru eru maka 17P.
Mbelata ihe ize ndụ nke ịmalite ịmụ nwa na ụmụ nwanyị na-enwe ime nwa na-enwe akụkọ ihe mere eme nke singleton nke ọmụmụ nwa oge (a họpụtara ọgwụ FDA maka nwaazụ).
Achọpụtara arụmọrụ nke dabere na mmụba n'ọtụtụ ụmụ nwanyị nyefere na <37 izu nke afọ ime; uru ahụike dị mma (dịka, mmụba na nhụjuanya na ọnwụ)
Nchebe na nrụpụta ọrụ gosipụtara naanị n'ime ụmụ nwanyị nwere ọmụmụ nwa na-aga n'ihu; adighi ezubere ka o jiri ya mee ihe na ndi nwanyi nwere otutu ozo ma obu ihe ndi ozo di na ihe ize ndụ maka ime omumu.
ACOG na-atụ aro ịnye progesterone supplementation maka igbochi ọmụmụ nwa oge na-agagharị na ụmụ nwanyị nwere ime ime otu afọ na tupu a mụọ nwa tupu oge eruo na <37 izu nke ime afọ n'ihi ịmụrụ nwa tupu oge eruo ma ọ bụ nkwụsị aka nke membranes.
6.17-Hydroxyprogesterone akpụkpọ ntụ ntụ:
7.17-Hydroxyprogesterone okpuru ntụ ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
8.17-Hydroxyprogesterone okpueze ntụ ọka Marketing:
9.Does 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ nwere ihe ọ bụla metụtara?
Synthetic progestin; emepụtara site na esterification nke 17α-hydroxyprogesterone, ihe na-emekarị nke metabolite nke progesterone, na acid caproic.
Enwere ọrụ progestogenic siri ike; egosi na ọ ga-emepụta mmetụta dị ukwuu na-adịgide adịgide ma dịkwuo ogologo karịa na progesterone.
O yiri ka enwere etrogenic, antiandrogenic, estrogenic, ma ọ bụ ọrụ glucocorticoid.
Ime ihe iji belata ihe ize ndụ nke ịmalite ịmụ nwa na-amaghị
III. 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ HNMR
IV. Olee otú ịzụta 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ si AASraw?